Ukuphuculwa kwe-SEO kwi-Page YOkunika Ixabiso Kwiwebhusayithi Yakho - Uphando oluvela kwi-Semalt
Naliphi na ishishini le-intanethi, ukufumana ingqalelo efanelekileyo kwi-intanethi yintloko. Kwi-intengiso ye-intanethi, ukubhuka ubungqina obuqinileyo kwiiplani ze-intanethi ezifana neenjini zokukhangela kunye neendaba zoluntu ngokuqhelekileyo luyinjongo ephambili. Eli nqanaba apho i-Search Engine Optimization iza kudlala. Injongo yimuphi na umkhankaso we-SEO uvelisa umgangatho wendlela ye-e-yorhwebo ngokubeka izikhundla eziphezulu kwi-SERP yamagama athile athile. Kule nto, i-site yakho ephakamileyo ivela, abaninzi abantu abafuna ukufumana loo magama angundoqo banokukhawulela iphepha lakho.
I-SEO kwi-Page iyakusiza amaphepha ukuba afumane igunya kumphumo yeenjini zokukhangela ngemiba efana nokukhethwa kwegama elingundoqo kunye nokudala umxholo - registrations domain. Ikhasi lewebhu elibonakala kuqala linama-99% amathuba okufumana uninzi lweefowuni, ngakumbi xa umxholo ubalulekile. Nangona kunjalo, ukwenza lo msebenzi akulula.
uLitter Mitchell, uMphathi weNtengo kaMthengi iSemalt , ichaza iindlela ezininzi malunga nendlela onokwenza ngayo i-SEO yakho kwiphepha le-page:
Ukukhethwa kwamagama abalulekileyo
Njengawo nawuphi na umngeni we-SEO, umsebenzi oyintloko ufumana amagama angundoqo okukhuphisana.Izinhlelo ezifana ne-Google AdWords kunye ne-SEMrush zinokukunceda ufumane amagama angundoqo anokuncintisana nobuthathaka. Amagama angundoqo ayimfuneko ukusetyenziswa kuyoumxholo wewebhu. Apha, ingqiqo kukuba xa uquka amagama angundoqo kumxholo wakho wewebhu, i-Google crawler bots ibonisa umxholo wakho kunye nayoivela kwiziphumo zophando zeGoogle ngexesha elizayo xa umntu echofoza kwikhonkco yakho..Amagama angundoqo afuna ukufumaneka kwiindawo ezithileikhasi lewebhu ukufezekisa le CTR. Ngokomzekelo, kubalulekile ukufaka amagama abalulekileyo kwiklasi yephepha, inkcazo yemeta kunye nephephaumxholo ngokwawo. I-AdWords inomxholo obonisa ukuba uhlalutyo kunye nokuhlalutya okwenziweyo kokusebenza kwegama lakho elingundoqo.
Umxholo kufanele ufaneleke kwi-niche ojolise kuyo. Kufuneka kubekwa ngokufanelekileyo kwamagama angundoqo kule khasi. Umxholo kufanele ube nobude obude, kuxhomekeke kwirekto yombuso okanye umbono weselula.Qinisekisa ukuba awunakho okuqukethwe okuphindwe kabini kwiphepha olungiselelayo. Ukuphindaphinda okuqukethwe kufaka ii-URL ezininzi, ukunciphisa iphepha igunya kunye nokusekwa.
Ukuze iGoogle iqaphele iphepha, kufuneka liphendule, likwazi ukuhamba ngombane kunye kunyeumxholo ochaphazelekayo. Iimpapasho ze-Google algorithm zamabhaso ngenjongo yomsebenzisi namava. Kufanele udale iphepha lewebhu elenza umsebenzisi ixesha elithile, kulula ukuyisebenzisa kunye nomnye ngokukhawuleza ukulayisha. Kubandakanywa ukuxhamla kweendaba zoluntu kunye namavidiyo kunokufumana eyongezelelweyoinzuzo.
Kuzo zonke ii-intanethi zokuqala, enye intengiso ye-digital ibalulekile.Iinkampani ezininzi ziyamkela kwiinkqubo ze-SEO kwaye ziphumelele ekwenzeni abathengi abaninzi ngaphandle kwelula kwi-SEO yekhasi kunye nemisebenzi yokuyila iwebhusayithi. Ukuphumelelakwi-intanethi, okubaluleke kakhulu kwizinto ze-SEO zifuna ukuthobela ngokuthe ngqo. Ngokomzekelo, abasebenzisi banokufumana ukuhamba kokuhamba ngokuthe ngqo kwigama elingundoqoukhetho kunye nokuzuza kwizinga eliphezulu lokuguqulwa kwempumelelo ye-SEO. Emva kokusebenzisa izikhokelo ezingentla, kwi-Intanethi yakhoukuthengisa kungabonakala kakhulu. Ezi ngcebiso azisebenzisi nje ukufumana iindwendwe ezininzi kodwa nazo zidlala inxaxheba kwisizukulwana esihamba phambili ngokunjalo njengokuguqula iindwendwe zibe ngabathengi.